रोमी ७:१-१० – Word of Truth, Nepal
रोमी ६:१४ मा उल्लेखित पावलको भनाइलाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ — “किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्नेछैन; किनभने तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ, तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। यसको तात्पर्य यो हो कि यदि हामी व्यवस्थाको अधीनमा भएका भए हामीमाथि पापले राज्य गर्नेथ्यो। अनुग्रहको माने के हो र व्यवस्थाको माने के हो? वाचम्यान नीद्वारा लिखित यी हरफहरूलाई विचार गर्नुहोस्:
“अनुग्रहको माने परमेश्वरले मेरो निम्ति केही गर्नु हो; व्यवस्थाको माने मैले परमेश्वरको निम्ति केही गर्नु हो। परमेश्वरबाटका त्यहाँ केही पवित्र र धर्ममय मागहरू छन् जसको जिम्मेवारी उहाँले मलाई सुम्पनुभएको छ: व्यवस्था भनेको यही हो। अब यदि व्यवस्थाको माने परमेश्वरले व्यवस्था पूरा गरियोस् भनेर मबाट केही माग राख्नुहुन्छ भने, तब व्यवस्थाबाट मुक्त हुनुको माने उहाँले त्यो अब उसो मबाट माग गर्नुहुन्न तर उहाँ आफैले त्यो प्रबन्ध गरिदिनुहुन्छ भन्ने हो। व्यवस्थाको तात्पर्य यो हो कि मैले उहाँको निम्ति केही गरोस् भनेर परमेश्वरले मबाट माग गर्नुहुन्छ; व्यवस्थाबाट मुक्त हुनुको माने उहाँले मलाई त्यसको दायित्वबाट छुट दिनुहुन्छ र अनुग्रहमा उहाँ आफैले दायित्व पूरा गरिदिनुहुन्छ…रोमी ७ मा वर्णित समस्या हो हो कि शरीरमा रहेर मान्छेले परमेश्वरको निम्ति केही गर्न खोज्यो। जब तपाईं त्यसरी परमेश्वरलाई खुशी पार्न खोज्नुहुन्छ तुरुन्तै तपाईंले आफूलाई व्यवस्थामनि राख्नुहुन्छ र रोमी ७ अध्यायको अनुभव तपाईंको हुन थाल्दछ। [The Normal Christian Life, पृष्ठ १०५। वाचम्यान नीद्वारा लिखित हरफहरू हामीले यहाँ उद्धरण गर्दैमा हामी उहाँका सबै लेखोटहरूसित सहमत छौं भन्ने होइन।]
पद १ – सिद्धान्त प्रस्तुत गरिन्छ
पद ४ – सिद्धान्तलाई प्रयोग गरिन्छ
“त्यसमाथि राज्य गर्दछ” को माने कुनै कुरामाथि प्रभुत्व जमाउँदछ। व्यवस्था मानिसमाथि प्रभु रहेको छ (मानिसलाई शासन गर्छ), त्यसैले मानिस बाचुञ्जेल व्यवस्थाको मुनि रहन्छ। ऊ बाँचिरहेसम्म व्यवस्थाको मुनि हुन्छ! व्यवस्थासितको मान्छेको सम्बन्धलाई तोड्न सक्ने एउटै मात्र कुरा छ: मृत्यु!
“पति भएको स्त्री” — यसको मतलब तिनी विवाहित छन्, आफ्ना पतिका अधीनमा छन् र उनको अधिकारमनि छन्।” “बाँधिएकी” — दुई व्यक्तिहरूको विवाह हुन्छ उनीहरू जीवनपर्यन्त बाँधिन्छन्; जबसम्म मृत्युले उनीहरूलाई अलग गर्दैन — मत्ती १९:५-६। विवाह दुईमा एकको मृत्यु नभएसम्म बन्धनकारी रहन्छ (१ कोरिन्थी ७:३९)। उक्त मृत्यु नभएसम्म कोही पनि विवाहको नियमबाट छुट्टिन सक्दैन।
विवाह जीवनपर्यन्तको समर्पणता हो। उनको पति बाचुञ्जेल अर्को व्यक्तिसित विवाह गर्न वा अर्को व्यक्तिसित सम्बन्ध गाँस्न स्वतन्त्र हुँदिनन् — त्यो त व्यभिचार ठहरिनेछ। पति मरे भने तिनी स्वतन्त्र हुन्छिन् (१ कोरिन्थी ७:३९)। मृत्युले उक्त सम्बन्धलाई टुङ्ग्याइदिन्छ र एउटा नयाँ सम्बन्ध हुन सक्न अनुमति दिन्छ। विवाह र सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी प्रभुको शिक्षाको लागि लूका १६:१८ मा हेर्नुहोस् (यो अरू ठाउँमा पनि उल्लेख छ)। यस उदाहरणको मूल तात्पर्य यो हो: मृत्युले उक्त सम्बन्धलाई टुङ्ग्याउँछ र एउटा नयाँ सम्बन्ध सम्भव गराउँछ।
म व्यवस्थाद्वारा बाँधिएको छु। ममाथि त्यसले राज्य गर्दछ (पद १)। म कसरी मुक्त होउँला र (पद ६)? ख्रीष्टको मृत्युमा म मरें! म व्यवस्थाको लेखि मरें! व्यवस्था कहिल्यै मर्न सक्दैन, तर म मरें! मेरो मृत्युले एकजना नयाँ पतिसँग एउटा नयाँ सम्बन्ध हुन सक्दछ: “अर्का व्यक्तिका अर्थात् जो मरेकाहरूबट बौरेर उठ्नुभएको छ, उहाँका हुनालाई” (पद ४)। म ख्रीष्टसँगै मरेको ले म व्यवस्थाबाट मुक्त भएको छु। म ख्रीष्टमा जिउँदो भएकोले म उहाँसँग एउटा सुन्दर सम्बन्धमा जोडिएको छु। परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहद्वारा हामीलाई व्यवस्थाबाट काटिएर स्वतन्त्र हुन र येशू ख्रीष्टसँग गाँसिन (उहाँसित एक हुन) सम्भव गराउनुभयो। ममाथि व्यवस्थाको होइन तर अब ख्रीष्टको प्रभुत्व रहेको छ। व्यवस्था एक भयङ्कर अप्रिय पति छन् — कठोर, चाम्रो, कडा, ठोस, माग राख्ने र अलचिलो। प्रभु चाहिँ सुन्दर पति हुनुहुन्छ — कृपालु, अनुग्रही र उहाँले, उहाँको सामर्थ्य र जीवनले, मलाई उहाँलाई खुशी पार्न सक्ने बनाउनुहुन्छ। जसरी वैवाहिक सम्बन्धले फल (छोराछोरी) उत्पन्न गराउँछ, ख्रीष्टसितको मेरो विवाहले फल उत्पन्न गराउँछ (रोमी ६:२२; गलाती ५:२२-२३ मा हेर्नुहोस्)। साथै यूहन्ना १५:१-७ पढ्नुहोस्: “फल”, “धेरै फल”, “अझ धेरै फल”।
फिलिप्पी १:२१ — किनकि मेरा निम्ति जिउनु बाइबल पढ्नु हो, पदहरू कण्ठ गर्नु हो, दिनहुँ कम्तीमा १५ मिनेट प्रार्थना गर्नु हो र हरेक अवसरमा साक्षी दिनु हो।
फिलिप्पी ३:८ — अँ, साँच्चै मेरो जिब्रोलाई लगाम लगाउनु, मेरा खराब बानीलाई सुधार्नु, प्रार्थना र वचनमा दिनहुँ लाग्न खोज्ने कामको सर्वश्रेष्ठताका निम्ति म सबै कुराहरू हानि ठान्छु।
फिलिप्पी ३:१० — म यसो गर्न सकूँ र त्यसो नगर्न सकूँ र साक्षी बाँड्न आफूलाई बलजफ्ती गर्न सकूँ र हरेक खराबीको दुष्टताबाट अलग हुन सकूँ।
२ कोरिन्थी ५:९ — यसकारण चाहे हामी शरीरमा रहौं चाहे नरहौं, हामी रिसाउनदेखि होसियार हुन सकौं, खानपीनको नियममा ध्यान दिन सकौं, पदहरू कण्ठ गर्न सकौं, आवश्यक आराम लिन सकौं, र सकभर खराब टिभी कार्यक्रमहरू धेरै नहेरेका होऔं भनेर प्रयत्न गर्दछौं।
फेरि पनि हामी वैवाहिक सम्बन्धलाई विचार गरौं। पतिले गर्नुपर्ने कामहरू त्यहाँ विभिन्न हुन्छन् र गर्न नहुने कुराहरू पनि त्यहाँ विभिन्न हुन्छन्। उसले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू त्यहाँ हुन्छन् र वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू त्यहाँ हुन्छन् र उसले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वहरू त्यहाँ हुन्छन्। तर उनले यी सबै कुराहरू किन गर्दछन् त? किनकि तिनले एकजना व्यक्तिलाई प्रेम गर्ने निर्णय गरेका छन् — अर्थात् आफ्नी पत्नीलाई। पत्नीले धेरै कामहरू गर्छिन्: खानाहरू तयार गर्छिन्, भाँडा माझ्छिन्, भुइँ सफा गर्छिन्, लुगाहरू धुन्छिन्, इत्यादि। तर यी सबै कामहरू उनले किन गर्छिन्? के उनका पतिले उनलाई “तिमीले यस्तो गर्नेछौ” र “यस्तो गर्नेछैनौ” भन्ने कुराहरूको एउटा लामो सूची दिएका हुनाले हो त? त्यस्तो कारणले त नहुनुपर्ने हो। उनले यी सबै किन गर्दैछन् भने उनले आफ्ना पतिको प्रेमको जवाफमा हो। वैवाहिक सम्बन्ध प्रेममा अडेको हुन्छ, व्यवस्थामा होइन।
के हामी एक व्यक्तिसँगै हिँड्दैछौं? कि हामी एउटा धर्म पूरा गर्न खोज्दैछौं? यूहन्ना १७:३ को प्रकाशमा के हामी आफ्ना हृदयहरूदेखि यसरी भन्न सक्छौं? — “म यस परमव्यक्तिलाई मेरा मुक्तिदाता, मेरा प्रभु, मेरा मित्र, मेरा सार्वभौम मालिक, मेरा सहायक, मेरा गोठाला, मलाई कहिल्यै नछोड्ने मेरा परममित्र… (अनि अझ अरू थुप्रै कुरा)”।
तर अब (ख्रीष्टमा अब बचाइएकोले) हामी व्यवस्थाबाट मुक्त (स्वतन्त्र, दाँज्नुहोस् ७:२ र ७:३ “मुक्त”) भएका छौं (भूतकाल), जसको बन्धनमा हामी थियौं, त्यसका निम्ति मरीकन। व्यवस्थाले एक व्यक्तिलाई कहिल्यै छुटकारा दिन सक्दैन। हामीलाई परमेश्वरको आत्मा र परमेश्वरको जीवन नै चाहिन्छ। विश्वासीले भन्न सक्दछ, “ख्रीष्टको मृत्युको कारण म व्यवस्थाको लेखि मरें र ख्रीष्टको बौरि उठाइको कारण म परमेश्वरको लेखि जिउँदछु।” पावलले यो कुरा यसरी व्यक्त गरे, ” (गलाती २:१९ साथै गलाती २:२० पनि हेर्नुहोस्)। ख्रीष्टमा एक विश्वासी भएकोले तपाईं व्यवस्थाको लेखि मर्नुभयो र परमेश्वरको लेखि जिउँदो हुनुभयो भन्ने कुरा के तपाईंले महसुस गर्नुभएको छ?
पद २ — व्यवस्थाद्वारा बाँधिएको
पद ३ — व्यवस्थाबाट मुक्त
पद ५ — व्यवस्थाको निम्ति मरेको
पद ६ — व्यवस्थाबाट मुक्त…जसको बन्धनमा हामी थियौं
व्यवस्था त कुनै भयङ्कर नराम्रो कुरा जस्तो सुनिन्छ! व्यवस्था कति नराम्रो कुरा होला त यदि म त्यसबाट छुटाइनुपर्छ र त्यसबाट मुक्त गरिनुपर्छ भने। त्यसले मलाई पक्रेको छ र बाँधेको छ! त्यसले मेरो पापपूर्ण वासनाहरूलाई जगाइदिन्छ! व्यवस्था त कुनै ज्यादै खराब कुरा जस्तो सुनिन्छ, तर त्यसो होइन, र पावलले यस गलत धारणालाई सच्च्याउँछन्: “के व्यवस्था पाप हो?” के व्यवस्था कुने खराब र पापपूर्ण कुरा हो? “कदापि होइन!” समस्याको जड व्यवस्था होइन! व्यवस्थालाई दोष्याउने काम नगरियोस्! (यस प्रश्नको जवाफ रोमी ७:१२ मा दिइएको छ। व्यवस्था त पापकै उल्टो कुरा हो!)।
यस टिप्पणीको रोमी ३:२० अन्तर्गत उल्लेखित ऐनाको उदाहरणलाई पुनः विचार गर्नुहोस्। ऐनाको उद्देश्य व्यक्ति फोहोर छ भनेर देखाउनु हो। समस्या ऐनाको होइन तर व्यक्तिको अनुहारको हो। ऐना त फोहोर छँदै छैन! तर ऐनाले अनुहारमा भएको फोहोरलाई देखाइदिन्छ। फोहोर अनुहारको दोष ऐनालाई दिन मिल्दैन। “तर” को तात्पर्य “बरु उल्टो”। व्यवस्था पाप होइन तर पापलाई प्रकट गरिदिने काम गर्दछ (रोमी ३:२०)। ऐना फोहोर होइन तर फोहोरलाई प्रकट गरिदिन्छ। “पाप भनेको के हो, म जान्नेथिइनँ” — पावल आफ्नै पापको बारेमा अनजान थिए। [ऐना आइपुग्नुअघि सम्म निजले आफ्नो अनुहार सफै छ भनी ठानेको थियो!] जसरी ऐनाले फोहोर देखाइदिन्छ त्यसरी नै व्यवस्थाले पाप देखाइदिन्छ (र कायल पार्दछ)।
व्यवस्थाले पापलाई कसरी प्रकट गर्छ भन्ने कुराको एउटा निश्चित उदाहरण पावलले प्रस्तुत गर्दछन्। उनको उदाहरण चाहिँ दसौं आज्ञा हो। “लोभलालच” को माने “प्रबल इच्छा, अरूसँग भएको कुराको निम्ति प्रबल इच्छा, लोभ, अरूसँग भएको कुनै कुराको निम्ति ठूलो चाहना”। अर्को शब्दमा, “मभित्र भएको यो लोभलालचको डरलाग्दो पापको बारेमा म अनभिज्ञ रहनेथिएँ तर परमेश्वरसँग एउटा गजबको ऐना रहेछ जुनचाहिँ मेरो आफ्नै हृदयको लोभलालचलाई प्रकट गर्नलाई विशेषरूपमा उपयुक्त रहेछ, अर्थात् दसौं आज्ञा (प्रस्थान २०:१७): “तिमीले लालच (अरूसँग भएका कुराहरूको निम्ति प्रबल इच्छा) नगर्नू।” निश्चित किसिमको फोहोरमैला प्रकट गर्नका निम्ति परमेश्वरसित एउटा निश्चित ऐना छ; लोभको मैला प्रकट गर्नलाई परमेश्वरको ऐनाको नाम दसौं आज्ञा हो।
“तर पाप (समस्याको जड) ले यस आज्ञा (दसौं आज्ञा) द्वारा मौका छोपेर (अवसर पाएर) ममा सबै प्रकारको लोभलालच (प्रबल इच्छा, पद ७ कै शब्द) उत्पन्न गरिदियो। किनकि व्यवस्थाबिना (आज्ञा आइपुग्नु अघि) पाप मरेको (निष्क्रिय, जीवनरहित, सुप्त, थोरै चहलपहल भएको अवस्थामा) थियो। ऐनाबिना आफ्नो फोहोर अनुहारको खासै धेरै महसुस हुँदैन तर ऐना आइपुगेपछि फोहोर त एक्कासी जिउँदो बन्दछ! “ओहो! कति फोहोर हो!” हुन त्यो अगाडिबाटै छँदै थियो तर ऐनाले उसलाई त्यसको महसुस गरायो! पारिलो घाममा डल्ला परेर सुतिराखेको सर्पलाई विचार गर्नुहोस्। त्यो निष्क्रिय छ, मरेको जस्तै छ। तर तपाईं गएर त्यसलाई चलाउनुभयो भने त्यो सर्प जागेर उठ्छ। व्यवस्थाले पनि पापलाई यस्तै किसिमले काम गर्दछ!
“एकपल्ट” ले पावललाई परमेश्वरको व्यवस्थाद्वारा सामना गरिनुभन्दा अगाडिको समयलाई जनाउँछ, आज्ञा आउनुभन्दा अघिको समय। “जिउँदो” को माने अविचलित, कायलरहित, आफूमाथि झुण्डिरहेको त्यो ठूलो मृत्यु दण्डको कुनै महसुस नभएको अवस्था। सबकुरा ठिकठाक छ जस्तै लाग्थ्यो (ऐनामा नहेरेको मान्छेको फोहोर अनुहार भए जस्तै। सब कुरा ठिकठाक जस्तै लाग्ला तर ठिकठाक छैन। समस्या त्यहाँ छँदै छ यद्यपि मलाई त्यसको महसुस समेत छैन)। “पाप जाग्यो” को माने “पाप फेरि जीवित भयो, पुनर्जागृत भयो” (बौरिउठाइलाई बयान गर्न प्रयोग हुने शब्द हो यो)। आज्ञाले पापलाई पुनर्जागृत गराउँछ र पापलाई बौराउँछ (सर्प एक्कासी जिउँदो पारिए जस्तै)। “म मरें” — एक्कासी म त एउटा व्यवस्था भङ्ग गर्ने व्यक्ति रहेछु र व्यवस्था भङ्ग गर्नेहरू मृत्यु दण्डको योग्य हुन्छन् भन्ने कुरा म महसुस गर्दछु! व्यवस्थालाई “मृत्युको सेवा” र “दोषी ठहराउने सेवा” भन्ने नाम दिइएको छ (२ कोरिन्थी ३:७,९)। परमेश्वरको पवित्र व्यवस्थाले पापीलाई कायल पार्दछ र “मार्दछ”!
“जीवनका निम्ति दिइएको” — यस भनाइको आशय मत्ती १९:१६-१७ र लूका १०:२५-२८ मा भेटिन्छ। जिउन र अनन्त जीवन पाउन एक व्यक्तिले केवल व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ। तर उसले त्यसलाई सिद्ध र पूर्ण रूपमा पालन गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ उसले जीवनभरि नै गर्नुपर्छ! समस्या के छ भने कुनै पनि व्यक्तिले सो गरेको छैन र कुनै पनि पापीले त्यो गर्न सक्दैन! सफा अनुहार हुनेहरूले ऐनाको कुनै डर मान्नुपर्दैन। समस्या के छ भने हामीमध्ये कसैको पनि अनुहार सफा छैन! हामी सबै पापी छौं र त्यसैले व्यवस्थाले हामी सबैलाई दोषी ठहराउँछ! “मैले मृत्युको कारण भएको भेट्टाएँ” — मलाई व्यवस्थाले सामना गर्दा मैले व्यवस्था विरुद्धको आफ्नै पापपूर्ण अनाज्ञाकारितालाई महसुस गरें र मैले भङ्ग गरिएको व्यवस्थाको डरलाग्दो दण्डको सामना गर्नुपर्ने भयो जुनचाहिँ हो मृत्यु।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 11:44:512020-04-28 14:36:11रोमी ७:१-१०
रोमी ६:१५-२३ रोमी ७:११-२५